Nanomboka nanaraka ny FastComet izahay (drafitra fototra – FastCloud) tamin’ny Oktobra 2017. Mampalahelo fa na dia teo aza ny maha olom-baovao akaiky azy, tsy nisalasala ny orinasa hanafoana ny antoka hidin-trano ho an’ny mpanjifany tato ho ato, ka niafara tamin’ny fihetseham-po mafy sy ny fandoro totohondry nanodidina.
2 matihanina Pelayan Mpandrindra maro Ny vidiny rehetra dia voamarina tsara mandritra ny fanavaozana tamin’ny Janoary 2020. Raha ny marina tsara dia azafady jereo ny lisitry ny vidiny amin’ny https://www.fastcomet.com/ Amin’ny famintinana: Hosting FastComet – Eny? Fepetrana haingana: maharatsy ny mifampiresaka FastComet dia hery iray hisaina amin’ny tontolon’ny fampiantranoana, fanomezana drafitra fampiantranoana mora sy manara-penitra miaraka amin’ireo endri-javatra mahavariana sy loharano. Manana karazan-drafitra be dia be koa izy io izay mikarakara ny fepetra rehetra. Na te hanangana tranokala kely ianao na iray izay handray mpitsidika an-tapitrisa iray volana, manana safidy hanome anao ny hery informatika ilainao ianao. Ny tsara indrindra, ny prix dia tena mandroso sy ambony indrindra. Ny fanohanana sy ny fampiharana fampiharana dia ny fisakafoanana efa mofomamy tsara. Nefa milaza aho fa amin’ny farany, ny fomba tsara indrindra hisedrana serivisy dia ny fitsapana azy ary ny FastComet dia manolotra vola 45 andro hiverenan’ny vola hialanao hevitra raha io no mpiara-miasa ilaina ilainao. Tsy manisy fahavoazana ny fitsapana azy ireo. FastComet dia atolotra ho an’ny …
Pelayan Mpandrindra maro Ny vidiny rehetra dia voamarina tsara mandritra ny fanavaozana tamin’ny Janoary 2020. Raha ny marina tsara dia azafady jereo ny lisitry ny vidiny amin’ny https://www.fastcomet.com/
Amin’ny famintinana: Hosting FastComet – Eny?